Mayelana Nathi - Gay Shop
U-Egay wadalwa ngokungaqapheli ukuthi wonke umuntu uhlukile, okhethekile, owomunye uhlobo. Sazi ukuthi sifuna ukusiza abantu abaningi ukuthi bathole futhi baveze okuhlukile futhi babonise izwe ukuthi bangabalingani ngempela.
Inkampani yethu isekelwe eFrance. Sisebenza nabathengisi emhlabeni wonke futhi izindawo zethu zokugcina izimpahla ikakhulukazi e-Asia. Umgomo wethu ukukhetha imikhiqizo emihle kakhulu yokuthambekela ehlangabezana nemigomo yethu yekhwalithi kanye nokuhleleka komzimba ngenkathi ihlala ingabizi. Izinto ezikhethiwe zenzelwe ukukuvumela ukuthi uveze ubuntu bakho ngenkathi uhlala isikhathi eside kakhulu.
Sifuna ukukuletha injabulo uma ujabule, uyathanda, uhamba noma uma usebenza. Futhi silapha ukuze sikusize ukuveza ubuntu bakho bokuziqhenya! Yingakho amaqoqo ethu anikezela ngezambatho zangaphansi ze-sexy nezesekeli ezingavamile. Izinto zethu nazo zisebenza futhi zacwaningwa ukukunikeza injabulo enkulu ngokuzisebenzisa. Sifana nawe! Futhi singathanda ukuthi uzokwabelana ngamaphupho akho kanye nezibuyekezo zakho nathi.
Yiqiniso, ibhizinisi lethu lalizoba yize, uma kwakungeyona yamakhasimende ethu amangazayo. Yingakho ngaso sonke isikhathi sinikeza ukusekelwa kwamakhasimende angcono nakakhulu kakhulu, uma unemibuzo noma izinkinga nge-oda lakho. Eqinisweni, singase singabi ibhizinisi lomndeni kodwa ngokuqinisekile sihlose ukuphatha wonke amakhasimende ethu njengomndeni, ngoba nje kufanelekile!
Amaqoqo ethu lapha ukuze abonise ukuthi uyasabeka kanjani futhi uyasipesheli.
Ngakho upheqa esitolo sethu bese ukhetha umkhiqizo noma amabili oyithandayo ...
Sekuyisikhathi sokuzitholela! Siyabonga ngokusikhetha!